Jadona ihany koa ny terivaimanta tsy manaiky fifampiresahana | Hevitra MPANOHARIANA |
Jadona ihany koa ny terivaimanta tsy manaiky fifampiresahana
2018-05-03 @ 22:49 in Politika
Ny ifotoran'ny lohateny dia ao amin'ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-doholona. Ny mpanara-baovao no mahalala ny fandaniana ilay lalàna niteraka ny korontana misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao, ny lalam-pifidianana izay manana endrika fanilihana kandidà atahorana handresy ny eo amin'ny fitondrana. Izay no niaingan'ny fitokonana ka niova endrika rehefa azo taorian'ny fifanandrinana tamin'ny mpitandro ny filaminana ny kianjan'ny 13 mey tamin'ny 21 avrily 2018; ny kianjan'ny 13 mey no karazana sabatra "Excalibur" tamin'ny tantaran'i Arthur mpanjaka (karazana angano nefa karazany mampiorina ny fanjakana anglisy mijoro hatramin'izao fotoana) nefa dia zary misy eto amin'ny firenentsika. Io "Excalibur" [Ex cal[ce] liber[atus] (« afaka tamin'ny vato ») Malagasy io no nohazavaiko tamin'ny lahatsoratra teo aloha hoe izay mitazona azy no manjary mahazo ny fahefana ara-drariny, izay no zava-nisy hatramin'ny taona 1972 no mankaty, fa ny amin'izao fotoana izao no hohitantsika eo.
Somary mitarazoka kely amin'ilay "Excalibur" aho satria imbetsaka tsy azo io kianjan'ny 13 mey io ka tsy nety nahazo ny fahefana izay te-hiditra nefa tsy tafiditra teo. Ny roa ihany no tantaraiko. Ny voalohany dia ny tolona nataon'ny Monima tamin'ny taona 1980, 1981, 1982 tany ho any. Noho ny sivana sy ny tsy fisian'ny lahatahiry amin'izany no tsy ahatsiarovana ny daty rehefa tsy voasoratra tamin'ny diary ilay izy, mbola kely loatra anefa aho hanaovako izany diary izany fa fantatro kosa ny fisiany noho ny resaka an-takonana any ho any.
Nikasa ny hiditra teo ny M.O.NI.MA [Madagasikara Otronin'ny Malagasy] fa tsy tafa mihitsy satria tsara aron'ny miaramila ny toerana, nivadika ho fandrobana ihany koa ny zavamisy noho ny mbola fotoana nampatanjaka ny TTS (Tary Tonga Saina), andian-jiolahy nofahanan'ny fanjakana, teo ambany fiahian'ny minisiteran'ny mponina, nanana ny foibeny tao amin'ny toby Pochard, izay lasa tsena amin'izao fotoana (2018). Ny TTS no mpandrava ny tolona sy karazan-tsindry ataon'ny fanjakana amin'izay mitady hanohitra azy, nirahina hanafika ireo orinasa tsy nanaiky hanome vola mpitondra fanjakana tamin'izany fotoana izany, ny takalony dia nanao izay tiany natao ny TTS ary nahavita naka an-keriny ireo zanak'Antananarivo vavy tsara tarehy ka niterahany na novonoiny rehefa tsy mety manaiky azy (lasa andevo ara-pananahana tao amin'ny toby ireo tovovavy ireo mandra-pandravan'ny Kung-Fu ny TTS tamin'ny 4 desambra 1984 raha tsy diso ny taona). Nisy fakan'i Monja Jaona ny radio tao Anosy tamin'izany fotoana izany. Resy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena moa ny M.O.NI.MA izay mpanohitra tao anatin'ny Mandatehezana Miaro ny Tolompiavotana tamin'izany fotoana izany. Krizy be tamin'io taona io fa toa iniana tsy lazaina satria tsy nahaogam-panjakana ny M.O.NI.MA fa tsy hoe miova fitondrana ihany vao krizy politika.
Ny faharoa hotantaraina indray dia ny tamin'ny 28 marsa 2009, nanao rodobe nidina teny ny mpanohana an-dRavalomanana rehefa voaongana teo amin'ny fitondrana folo andro mahery kely talohan'io daty voatondro io. Io no fidinana ofisialy tamin'izany fotoana izany, ravan'ny miaramila ilay izy satria nivoaka tao amin'ny tobin'ny 1/RM1 ny miaramila niaraka tamin'ny basy ka nanapaka teo afovoany ilay filaharambe. Hitantsika ny tohiny fa tsy nety naharesy tosika ny fitondrana tetezamita ny mpanohana an-dRavalomanana sy ny mpanohitra ny fanonganam-panjakana nataon'ny miaramila (Capsat) niaraka tamin'i Andry Rajoelina.
Izay no ela fa hiverina amin'ny zavatra saika hotantaraina aho, marihiko dieny ety am-piandohana fa samy nanao fahadisoana avokoa ireo ankolafy roa nampandany sy nitsipaka ny lalam-pifidianana araka ny fiheverako. Fahadisoan'ny nampandany azy ny amboletra tsy niraharaha ireo fanitsiana notadiavin'ny sasany satria nihevitra ny hoe matanjaka arovan'ny mpitandro ny filaminana ka nitady ny fomba rehetra hampandaniana azy satria hoe izay tapaky ny maro an'isa ihany io. Sady nampisara-kevitra anefa no nampisara-bazana ilay lalam-pifidianana ka nahatonga antsika ho amin'izao toe-draharaha izao. Tsy hoe maro an'isa ianao dia azonao atao daholo ny zava-drehetra. Ny Arema tamin'ny taona 1990-1991 aza mbola misaina lavitra noho ny depioten'ny 2018 raha amin'izay toe-javatra izay. Fa nisy inona tao amin'ny antenimiera tamin'izany taona izany?
Mampahatsiahy antsika ny taona fa nisy ny krizy tamin'izany fotoana ary nahazo ny fifehezana ny kianjan'ny 13 mey ny mpitolon'ny Hery Velona. Nisy ny fivorian'ny tao amin'ny Antenimieram-Pirenena Entim-Bahoaka izay ny A.RE.MA no nanjaka tokana tao. Ho famahana ny fikatsoana satria nitokona tsy nisy nisokatra ny minisitera rehetra teto Antananarivo dia nisy ny depiote nanolo-kevitra ny hamindrana vonjimaika ny renivohitra hiala an'Antananarivo hafindra ho any Toamasina. Nandre izany ny depiote lany teto amin'ny faritanin'Antananarivo izay A.RE.MA ihany no maro an'isa dia tsy niresaka na niady hevitra ny amin'izany fa tonga dia nivoaka fotsiny izao. Ny Depiote Razakaboana lany tamin'ny lisitra A.RE.MA tao Antananarivo Renivohitra no nitarika ny namany hivoaka tsy hiady hevitra amin'izany akory. Nahita izany ireo depioten'ny faritany dimy dia nikoropaka nanao izay hampiverina ireo depiote ireo tamin'ny resaka, niezaka niteny hoe vonjimaika ihany anie ilay famindrana fa tsy nety niverina ireo depioten'ny faritanin'Antananarivo ireo fa namaly hoe lanio ao ny lalànanareo dia hohitantsika eo. Vokany tsy noresahina intsony ilay volavolan-dalana na dia mety ho azon'ny depiote nolaniana tamin'ny 80% na 97% isanjato aza satria tsy nisy tao ny depioten'ny faritanin'Antananarivo hitsipaka azy. Vokany hafa, nampiditra ny faritany mizaka tena Ratsiraka rehefa tafaverina indray teo amin'ny fitondrana tamin'ny taona 1997. Aiza ho aiza amin'izany toe-javatra izany ny depioten'ny H.V.M sy ny mpiara-dia taminy? Nanao amboletra tamin'ny fampandaniana ihany na dia efa nalaza aza ilay volavolan-dalana fa tsy araka ny tokony ho izy mihitsy amin'ny mangarahara.
Etsy ankilan'izany, nanao fahadisoana ihany koa ny ao amin'ny depioten'ny fanovana 2018 (MAPAR-TIM-MMM-Mahaleotena) tsy manaiky ny hifampiresaka fa manao amboletra hamoaka mpiasam-panjakana ary lasa mampiditra ny ankizy tsy ampy taona amin'ny tolona rehefa mandrava ny fampianarana. Lasa nivaona mihitsy moa raha ny hita tany Ambatondrazaka amin'ny hoe hametraka DREN sy Chef CISCO vaovao. Ilay famoahana ny ankizy tsy hianatra no fahotana mahafaty nataon'ny depioten'ny fanovana. Lalan-tokana no tokony atao ary tsy maintsy hiditra amin'izany foana na oviana na oviana dia ny fifampiresahana izany. Tokony nahazo vahana saingy nanary izany tombony izany tsy amin'antony. Tokony hotadidin-dry zareo fa ny kiribibin'i Andry Rajoelina tamin'ny taona 2009 hoe tsy maintsy miala Ravalomanana vao mifampiresaka no saika naharava ny tolona TGV 2009 raha tsy niditra an-tsehatra ny CAPSAT Soanierana. Koa saino ry depioten'ny fanovana izay hanohizanareo ny tolonareo ary tokony hieritreritra manokana ny depiote TIM fa efa miha-tsy fantatry ny maro mpanohana anareo intsony (ary ahiana dia ahiana ny tsy ankatoavan'ny mpanohana TIM anareo intsony na haharava hatreo ny TIM).